Njengomthetho, akakho owake lukhipha imali lula. Leli cebo sisebenza hhayi kuphela empilweni kodwa futhi emhlabeni virtual. Amakhodi uvumele isamba angenamkhawulo imali, futhi ngenxa yalokho, izinzuzo phezu izimbangi zayo.
Njalo wesikole uyazi mayelana nokuba khona kwamakamu lokhu Bhalobhasha. Kodwa ngezinye izikhathi isifuna uthole izikhali entsha kanokusho ukunqoba impi! Yingakho abantu basebenzisa amaqhinga ahlukahlukene. An umsebenzisi ongenalwazi kungaba abazibuza yona lapho ukungena amakhodi ku "Contra City." Thola imishini khulula, imali, izikhali kanye nemishini ekhethekile, ngokusobala ukuvulwa kwaleyo amabalazwe amasha - konke ikhono ukundlula uhlelo evulekile ngosizo inhlanganisela ekhethekile.
Kukhona inani elikhulu amaphasiwedi emidlalo lisize indawo isitha, noma ngisho zingaphenduka eceleni kwakhe. Loluhlu ngempela ebanzi, kodwa kuqala udinga ukuthola lapho ukungena amakhodi ku "Contra City." Thola noma iyiphi inhlanganisela udinga ebhokisini lengxoxo isetshenziselwa izinhlelo. Call ke, ungasebenzisa eziningi okhiye. Ngemva ngokucindezela u-Shift + E Kufanele ubone somugqa lapho ufuna ukufaka ikhodi efanele. Kwezinye izimo, lezi nemingcele ukushintsha, ngakho konke basaqhubeka befuna indawo lapho ukungena amakhodi ku "Contra City." Omunye isixazululo sale nkinga ukuba kabusha wonke amasethingi ukuze isimo "okuzenzakalelayo". Ngakho, iwindi ayesifuna ngabomvu izovela uma ucindezela uchungechunge izinkinobho, lapho ukungena amakhodi ku "Contra City."
Ungalanda futhi uhlelo ukwambula. Ngakho, enye ungagwema umbuzo lapho ukungena amakhodi ku "Contra City." Uhlelo ilayisha ngokuzenzakalelayo ku umdlalo, ngokudlula zonke izinto eziyinkinga. Sebenzisa ikhodi lula kakhulu imisebenzi umsebenzisi, kodwa ngokuvamile inqubo iba ngaphansi ezithakazelisayo lapho yonke impumelelo avele ngenxa nokugenca, hhayi amakhono.
GeForce Experience is awukaqali - yini okumele ngiyenze?
Cocktails "Mosvar" - kuyini?
World Of Tanks: walahlekelwa umsindo in the game. Yini okumelwe uyenze?
Yiziphi tutorials? ukuhlaziywa enemininingwane
Umthetho emthethweni ukuthengisa amacala amancane. Izici wokutholwa yayo. Lokho kuhlanganisa?
Ngayinye Gateway kuzovumela ukudala eliphezulu futhi eziphansi wezokuxhumana
Highscreen Spider: Ukubuyekeza imifanekiso, izibuyekezo zamakhasimende nochwepheshe
Primer Kuhle kakhulu emehlweni Sibutsetelo, izici, imithetho isicelo kanye nokubuyekeza
Tenerife resort of Playa de las Americas